यूकेमा आयु सत्यापन | इनाम पुरस्कार
कानुन ब्रिटेनमा उमेर प्रमाणिकरण
पोर्नोग्राफी वयस्क मनोरञ्जन हो। त्यहाँ वास्तविक जीवनमा बच्चाहरूको लागि पहुँचको लागि सरकारी प्रतिबन्धित इजाजतपत्र प्रतिबन्धहरू छन् जुन जुआको लागि हो, शराब, सिगरेट वा चाकू खरीद। यी सबूत आधारित स्वास्थ्य कारणहरूमा आधारित छन्। तथापि अनलाइन पोर्नोग्राफी बालबालिकालाई निःशुल्क रूपमा उपलब्ध छ। अहिलेसम्म सरकारले बच्चाहरूलाई अनलाइन पोर्नोग्राफीमा प्रतिबन्ध लागू गर्न कुनै तरिका छैन। तथापि, यो उमेर प्रमाणीकरण को एक मजबूत प्रणाली को परिचय को बारे मा बदलन को बारे मा छ।
17 जुलाई 2017 मा यूकेको डिजिटल मन्त्री मैट ह्यानककले यसका लागि सुरुवात आदेशमा हस्ताक्षर गरे डिजिटल अर्थव्यवस्था अधिनियम 2017 जसले अप्रिलमा रॉयल एन्टिन्ट प्राप्त गर्यो। तपाईं अनलाइन पोर्नोग्राफी को लागि कार्य को भाग देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ.
नतीजा काम को रूप मा अनलाइन पोर्नोग्राफी को उपयोग को लागि एक नया उमेर सत्यापन प्रक्रिया शुरू मा शुरू भयो। यो अप्रिल 2019 द्वारा प्रतिस्थापित गरिएको छ, यूके बनाउन बालबालिकाहरुलाई अनलाइन बनाउन सबै भन्दा सुरक्षित स्थान बनाउन सरकारको काममा एक मील का पत्थर।
इवार्ड फाउण्डेशनले 2016 मा सार्वजनिक परामर्शमा योगदान दिए र कानून निर्माणको लागि उपयुक्त बनाउन को लागी संसद सदस्यहरूलाई लुम्बिनीमा सक्रिय रहेको थियो।
आयु प्रमाणिकरण कसरी कार्य गर्नेछ?
अधिनियमको तहत ब्रिटिश बोर्डको फिल्म वर्गीकरण (बीबीसीसी) लाई नियन्त्रक बनाइनेछ र इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरू बनाउनका लागि शक्ति प्रदान गरिनेछ पोर्टलोग्राफिक साइटहरूमा पहुँच रोक्न जुन बालबालिका प्रमाणिकरणका उपायहरु लाई बच्चाहरु को रक्षा गर्न को लागी छैन।
वेबसाइटहरू ब्लक गर्ने आवश्यकताले बेलायती र विदेशीका सबै साइटहरूमा लागू हुनेछ। वेबसाइटहरू EU मा कहाँ पुग्छ प्रक्रिया प्रक्रिया मूल देशको साथ उपयुक्त हुनेछ।
संक्षेपमा, कुन कुराले सरकारलाई हानिकारक अश्लील सामग्रीको पहुँच गर्न बालबालिकाहरूको रक्षा गर्न गरेको छ:
सरकार बालबालिकालाई सुरक्षाको बारेमा पोर्टेगोग्राफी आपूर्तिकर्ताहरूसँग कुरा गरिरहेको छ। शीर्ष 50 साइटहरू प्रयोगकर्ताहरूको 70% खाताको खाता हो। धेरै, मार्केट साझेदारी द्वारा सबैभन्दा ठूलो निःशुल्क साइट सहित, उमेरको प्रमाणीकरण लागू गर्न सरकारसँग सहमत भएको छ।
नि: शुल्क पोर्टेगोग्राफी साइटहरु सशुल्क साइटहरु को लागि टीजर्स हुन्। भुक्तान सेवा प्रदायकहरू (उदाहरणका लागि वीआईएसए, मास्टरकार्ड) ले भने आवश्यक भएमा, गैर-अनुपालन वेबसाइटहरूबाट लेनदेन सेवाहरू फिर्ता लिने।
वेबसाईटहरूले सर्वरहरूलाई उनीहरूको होस्ट गर्न विज्ञापनदाताहरूलाई चाहिन्छ, उनीहरूलाई समर्थन गर्न, र उनीहरूलाई जोड्ने आधारभूत संरचना चाहिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय र अपरिचित तरिकाको साथमा इन्टरनेटले यूके सरकार चलाउन सहयोग पुर्याउन सहयोग पुर्याउन सक्दैन, तर नियामकले उद्योगबाट सहयोग प्राप्त गर्न खोज्नेछ।
ती साइटहरूको लागि जुन उमेर प्रमाणीकरणको पालन गर्दैनन् हामी नियामकहरू ISP अवरुद्ध गर्न र साइटहरू तल लगाउन अनुमति दिन्छौं।